War Deg Deg ah:- Maxamed Cabdi Waare oo noqday Madxaweynaha Hirshabeelle - Hablaha Media Network
War Deg Deg ah:- Maxamed Cabdi Waare oo noqday Madxaweynaha Hirshabeelle
HMN:- Maxamed Cabdi Waare ayaa ku guuleystay in uu noqdo Madaxweynaha beddelaya Cali Cabdullahi Cosoble oo ay xilka qaadis ku sameeyeen Xildhibaannada Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle.
Doorashada oo wareeggii 1aad ay isugu soo ahareen afar musharrax ayaa waxaa tana sulay labo ka mid ah waxaana isugu soo haray Maxamed Cabdi Waare iyo Daahir Cabdulle Cawaale.
Guddiga doorashada ayaa sheegay in 97; Xildhibaan ee codeysay ay 74; ka mid ah codka siiyeen Musharraxa guuleystay ee Maxamed Cabdi Waare ,halka Daahir Cabdulle Cawaale uu helay 23 cod.
Daahir Cabdulle Cawaale oo natiijada kaddib madasha ka hadlay ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo natiijada ka soo baxday doorashada waxaana uu intaas raaciyay in uu u hambalyeynayo madaxweynaha cusub ee la doortay.
Maxamed Cabdi Waare waxaa uu kaalinta 2aad ka galay doorashadii 1aad ee Madwxeynaha Hirshabeelle loogu tartamayay Sanadkii 2016kii,waxaana markaas ka guuleystay Cali Cabdullahi Cosoble.